Izinzuzo zeBensen Company
IHenan Bensen Inductry Co., Ltd
Izithuthi Upholstery lesikhumba
Car Floor Mat Izinto
Imoto Unyawo Mat
Isikhumba Semoto Unyawo Mat
Izesekeli Zesihlalo Semoto
Car Isihlalo Cushion
Ikhava Yesitulo Semoto
Inkampani yakwaBensen eminyakeni edlule igcizelela ikhwalithi kuqala, amakhasimende ngenhloso, agxile ekuthuthukisweni kwe- imoto ingaphakathi lokunquma. UBensen ubeseminyakeni eyishumi edlule yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza, futhi unendawo yethu yokusebenzela yefektri neyokukhiqiza, kuwo wonke amakhasimende azakhela umhlobiso wawo wangaphakathi wemoto. Ngasikhathi sinye, samukela ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu, kanye nekhwalithi engcono kakhulu yempahla eluhlaza yesikhumba se-auto microfiber. UBensen ukhiqiza imikhiqizo ehamba phambili, futhi uthemba ukusungula ukubambisana kwesikhathi eside nawo wonke amathalente aphesheya kwezilwandle. Kungukukhetha kwakho ngaphandle kokuzisola ukukhetha uBensen.
● Izinzuzo zeBensen Company:
1. IBensen inefektri yayo futhi ingahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso.
2. Sineqoqo elikhulu lesikhumba elilungele ukuthunyelwa ngokushesha.
3. Imibala ehlukene engama-40 + isikhumba semoto microfiber ngokukhetha kwakho
4. Imikhiqizo ye-Bensen iyatholakala emaphethini ahlukahlukene, kufaka phakathi amaphethini we-BMW, ​​amaphethini e-pinhole, njll. Futhi nokwenza ngokwezifiso kuyatholakala ngokuya ngezidingo zakho.
5. Amasampula wamahhala angahlinzekwa ukuthi uhlole ikhwalithi.
6. Ithimba lochwepheshe lokuxazulula izinkinga zakho mayelana nezinto zangaphakathi emotweni.
● Izinzuzo zikaBensimikhiqizo ka en:
Izinzuzo of zesikhumba se-microfiber:
Isikhumba se-auto microfiberinemibala ehlukahlukene, sinemibala engama-40 + yamakhasimende ongakhetha kuyo. Ukushesha kombala okuphezulu. Kusetshenziswa indlela ye-ISO 105-X12, ukushesha kombala okugcobayo kwesikhumba seBensen microfiber semoto kungafinyelela ku-5. Futhi kungamelana namandla amakhulu wezinyembezi ka-80N. EzikaBensenisikhumba semoto microfiber icishe iphefumuleke njengesikhumba sangempela.
Strong ibala ukumelana, kulula ukuyihlanza. Amabala ekhofi nejusi angasuswa ngethawula lephepha elimanzi; ukugqoka okuhle ukumelana. Ukusetshenziswa kwansuku zonke ngokuyisisekelo akukho ukugqokwa, noma ukusetshenziswa kokuphikisana kwensimbi, kepha futhi kungagcina kuhlanzekile, kungabikho umkhondo osobala wokugqoka. UBensenisikhumba se-auto suedeisebenzisa isikhumba se-microfiber suede, isakhiwo esikhethekile ukuqinisekisa ukungena kwayo komoya okuhle; isipiliyoni esingcono sokushayela. Kungavimba umzimba nesihlalo somshayeli ekushibilikeni lapho ushayela ngokushesha. Umbala ugcwele kakhulu kunesikhumba se-PU, futhi umphumela obonakalayo uqhathaniswa nesikhumba. Ngokuhlanganiswa okuthile kombala, umphumela wokubuka unamandla kunesikhumba se-PU.
Izinzuzo of zemata phansi yemoto:
Isakhiwo semichilo kasilika, singalawulwa kahle ngothuli nomata ngaphakathi, akudingeki ukuthi unakekele zonke izinsuku, kodwa futhi nokugcina imoto ihlanzekile;
Izinto ezisezingeni eliphakeme ze-2, impilo yenkonzo engaphezulu kweminyaka emihlanu;
Imodeli ngayinye izolinganisa imininingwane yemata yonyawo, eyenziwe yaba ngeyakho, ayikho ingozi yokuphepha;
4.Omata bezimoto akuphazamisi ukuphepha kokushayela, ubukhulu bamata wezinyawo buqhathaniswa nemoto yangempela, izingxenye ezibalulekile, njenge-clutch, usayizi we-throttle yakhelwe kahle, ngeke ibe nomthelela omncane;
Umbala uphelele, ukuhlangabezana nokukhetha kwakho.
Izinzuzo of zesethi yesihlalo semoto:
Indwangu yesikhwama semoto yenkampani yakwaBensen isebenzisa imicu yesitshalo emsulwa, enobungane futhi ekhululekile, elwa namagciwane kanye ne-anti-itch, ukuphefumula nokujuluka okuhle, i-anti-static, akukho ukuphoqa, hhayi ukukhungatheka, hhayi ukugoqa okunqenqemeni, okuthambile nokubushelelezi. Isikhumba esingezansi esisebenzisa u-1.4 mm ukuphakama kokuqina kwemvelo ukuvikela i-TPU isikhumba segwebu, kungaqinisekisa ukuthi isihlalo somcamelo sithamba ukuqina, ukugoqa okungamisi okokugqoka, ukulingana okuqinile akukhubazi. Idizayini engezansi engenalutho yesikhumba ithuthukisa kakhulu ukuphefumula kwesikhumba. Futhi ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuphezulu bokuhlobisa (ikakhulukazi obusetshenziswa ezingutsheni ezisezingeni eliphezulu, izigqoko nokunye okufekethisiwe), ukwenziwa ngcono kwezimboni kwenqubo yendabuko yokufekethiswa, amabhithi we-16358 wokuthunga, okuchaza umthunzi ophelele wesakhiwo sasemadolobheni esinezici ezintathu.Umcamelo wesihlalo semoto ingakudambisa ukukhathala lapho ushayela, uma udinga, sicela uxhumane nathi.
Ikheli: Igumbi 912, Floor 9, Lujin Building, 14 Shangwu waihuan Rd, CBD Convention Centre, Zhengzhou Area (zhengdong xinqu), indawo yokuhweba yamahhala yeHenan Plot.
Ucingo: + 86-13381860818
I-Skype: + 86-13381860818
Noma yimiphi imibuzo mayelana nezinto ezingaphakathi emotweni nemibala, sicela ukhululeke ukuxhumana nami nethimba lochwepheshe elikusebenzelayo